July (20) June (24) May (30) April (19) March (20) February (28) January (20) Beeraha iyo Xoolaha QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA">QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkaan ka dhageyso qiimaha Xoolaha suuqyada Soomaaliya, Fowsiya Cumar Barre ayaa soo jeedineysa....
31 MAY 2017 QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA">Akhri
Waxaa soo jeedinaya Maxamed Xasan....
30 MAY 2017 Akhri
Puntland: 3Milyan oo neef oo la daaweynayo Muddo dheer oo roob la’aan ah kadib, waxaa curtay oo si fiican uga da’ay roobka gu’ga meelo badan oo Soomaaliya kamid ah, xoolaha oo ay ku tiirasan yihiin Soomaali badan oo reer miyi...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkaan ka dhageyso qiimaha xoolaha nool ee suuqa magaalada Beledweyne, Fowsiya Cumar Barre ayaa soo jeedineysa....
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Qiimaha xoolaha ee sayladda Boorame ee gobolka Awdal waxaa soo diray Cabdale Cali Yuusuf, Waxaana soo jeedinaysa Waris Maxamed. ...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Qiimaha xoolaha ee maanta waxaan ku eegeynaa sayladda magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal, waxaana inoo soo diray weriyaheena Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji.
Waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Taysir. ...
25 MAY 2017 Akhri
Dhoofinta ariga oo dib uga billaabatay dekedda Berbera Ganacsatada xoolaha nool ee Soomaaliya ayaa dib u billaabay dhoofinta ariga, kaddib sagaal bilood oo aan xoolo la dhoofin abaarta darteed. Daaq-la’aanta ka dhalatay abaartaas ayaa yareysay tayad...
Burco: Shirkadaha ganacsiga xoolaha oo dib u bilaabay dhoofka xoolaha Sagaal bilood kadib oo ay xirnayd sayladda Burco ayaa shirkado ka ganacsadaa xoolaha bilaabeen inay iibsadaan xoolo ay u dhoofinayaan wadamada Imaaraadka iyo Cumaan, inkastoo weli dhinaca Sucuudiga ay...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkaan ka dhageyso qiimaha xoolaha nool ee suuqyada magaalooyinka Baardheere iyo Afgooye, Fowsiya Cumar Barre ayaa soo jeedineysa....
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga so kala diray magaalooyinka Muqdisho iyo Buhoodle. Waxaa soo jeedinaya Cali Nuur Salaad....
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Dhegeyso qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray magaalada Buulo-burte...
Beeraleeyda Waraabka Baardheere oo tacbashada billaabay Beeraleyda waraabka ee degmada Baardheere iyo deegaannada u dhow ayaa billaabay tacabka beeraha kaddib markii uu roob fiican ka da'ay gobolkaas. Webiga Jubba oo qallalnaa ayaa keenay biyo fiican, waxa...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Wararka qiimaha xoolaha waxaan ku eegaynaa maanta sayladda magaalada Baydhabo iyo Boorame, waxaana soo kala diray Muxiyadiin Xusni iyo Cabdalla Cali Yuusuf. Waxaa soo jeedinaysa Waris Maxamed.&nb...
20 MAY 2017 Akhri
Qiimaha xoolaha oo kor u kacay sayladda Buuhoodle xilli roobaadka Xoolo dhaqatada ayaan iib keenayn xoolaha yar ee u haray, tanoo saamayn ku yeelatay qiimaha xooalaha la keenayo sayladda Buuhoodle. Warbixin arrintaan ku saabsan waxaa noo soo diray weriyaheena Khadar...
Qoysas beeraley ah oo ka faa'ideysanaya roobka oo bilaabay abuurka dalagyo kala duwan Boqolaal qoys oo beeraleey ah ayaa dib u bilaabay abuurka dalagyo kala duwan kuwaasoo bilo barakac ku ahaa magaalada Baydhabo kadib marki abaartu saameysay. ...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Dhegeyso qiimaha xoolaha oo lag aso okal adiray magaalooyinka Jowhar, Laascaanood iyo Kismaayo. Waxaa soo jeedinaya Cali Nuur Salaad....
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Qiimaha xoolaha ee maanta waxaan ku eegaynaa sayladaha Baargaal oo gobolka Bari ah iyo Garoowe oo Nugaal ah, waxaana soo diray Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji. Waxa soo jeedinaya Cabdixamiid Cabdicasiis....
Sanaag: daad xoolo qaaday Ilaa 500 o ari ah ayuu qaaday daad ka dhashay roob mahiigaan ah oo ka da'ay dhulka miyiga ah ee ku xeeray degmada Ceel Af-weyn ee gobolka Sanaag, dadka deegaan ayaa Raadiyaha Ergo uga warramay:...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray seyladaha Salagle iyo Afgooye, Fawsiya Cumar Barre ayaa soo jeedineysa...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray seyladaha magaalooyinka Muqdisho iyo Buhoodle. Waxaa soo jeedinaya Maxmaed Xasan....
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray magaalada Beledweyne...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Wararka qiimaha xoolaha ee sayladaha Boorame oo gobolka Awdal ah iyo Baydhabo oo gobolka Bay ah, waxaa soo kala diray Cabdala Cali iyo Muxiyadiin Xusni. Waxaa soo jeedinaya Cali Nuur Salaad. ...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray magaalooyinka Kismaayo, Laascaanood iyo Jowhar. Waxaa soo jeedinaysa Waris Maxamed....
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Wararka qiimaha xoolaha ee sayladaha Garoowe, Gaalkacayo iyo Bacaad weyn, waxaa soo kala diray Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji iyo Jibriil Cismaan. Waxa soo jeedinaysa Fowsiya Cumar Barre. ...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray Afgooye iyo Saakoow. Waxaa soo jeedinaysa Waris Maxamed ...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kal adiray magaalooyinka Mudisho iyo Buhoodle. Waxaa soo jeedinaya Maxmaed Xasan....
Boorama: Xoolo laga daaweeyey cudurrada sambabka iyo kuwa ka dhasha shilinta Halkan ka dhegeyo xoolo gaaraya 350, 991 ayaa laga daaweeyey cudurrada sambabka iyo kuwa ka dhasha shilinta. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo diray Cabdalle Cali Yuusuf....
05 MAY 2017 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray magaalooyinka Laascaanood iyo Jowhar. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Xasan....
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo qayb ka ah baahinta Ergo maalin walba marka laga reebo maalinta axadda ah. Waxaa soo jeedinaysa Waris Maxamed....
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo qayb ka ah baahinta idaacadda Ergo. Waxaa soo jeedinaysa Waris Maxamed....